Uphethiloli brushcutter - inombolo imishini 1 inakekelwa ngesakhiwo, kungaba kalula futhi ngokushesha ukusingatha kahle noma isiphi utshani ngisho emahlozini aminyene. Ngokungafani lawnmower mowers futhi trimmers - kumadivayisi ephathekayo. Uma ungakaze wasebenzisa leli thuluzi futhi nakwazi mayelana nokuthi ukukhetha trimmers, bazi ukuthi ekutholeni isici lapho ukhetha lolu hlobo engadini imishini futhi ukonga, futhi izici site lakho. Kubalulekile ukuqonda ukuthi brushcutter lokho wathenga: ukusika utshani ithambe utshani flat noma ukuhlanza elidala khuhla uqweqwe ukhula omile endaweni elinamagquma.
On mowers ukukhwezwa kusilungisi ikhanda, okusho ukuthi ungakwazi sika nabancane, futhi utshani ephakeme. It ngaphezu line ukudoba ka 2.6 mm ukujiya ingafakwa nensimbi ummese. Lapho ufaka i-disc uzokwazi sika ukhula ngisho ezifana umhlonyane, burdock noma nezihlahla (isib, okusajingijolo). Imininingwane ngokuqondile leli thuluzi kuxhomeke imisebenzi ubeka phambi kwabo. Kukhula ukucutshungulwa endaweni, ukuya ngokuqina Amathe okudingayo. Qaphela ukuthi injini ungaba ithuluzi ezifana-stroke ezimbili futhi ezine-unhlangothi. Ngaphambi kanjani ukukhetha isikela, ukubala amavidyo square ukuthi udinga ukuthi isetshenzwe. Uma utshani endaweni yakho kusukela ku-200 kuya ku-400 square metres. m., kuyoba kulula ukusebenzisa le lawnmower ibhethri noma trimmers umthamo kusuka 3,5 kuya 5 amalitha. a. Ngokuhamba kwesikhathi uyokwazi ukusingatha bandwidth ngaphakathi 45 cm. Futhi ukhetha trimmers kufanele kube abanikazi iziza ezinkulu (kusuka 800 sq. M. Nokuningi). Amandla ithuluzi we wacosha kufanele kube kusuka 4.5 kuya 6 amalitha. c, ububanzi ukuzisika -. 50 cm.
Cabanga onjani trimmers ukukhetha, futhi awukwazi ayeke ku lolutsite? Nakani izinketho ezengeziwe, ezifana mulching (bevala inhlabathi Peat, amaqabunga, nokunye. P.), Ukuqoqa utshani bagging kanye ukukhululwa kwe utshani. Lezi zici ukwenza ukunakekela utshani libe lula futhi lusheshe. Endaweni ehlukile, ungakwazi ukuthenga futhi akwazi ukugcina ukusika izihlahla ezincane. Futhi phezu mowers ungakwazi isethwe ngaphezu intambo ukusika imimese ukusika ukhula ezinzima futhi ezihlabayo. Brushcutter usizo wena ugunda ukhula kanzima ukuze afinyelele izindawo noma ukunciphisa ikhava emva wotshani. Izingxenye ezinkulu kulula ukusingatha amamodeli abe kushaft izimisele futhi isibambo D emise. Benzokosilka isandla awuxhomekile emandleni kagesi. Ngakho-ke, ezihambayo buthule wakhe ensimini, uyokwazi ukulungisa hhayi kuphela utshani eduze nendlu, kodwa futhi ukuba ezindaweni ezikude.
Indlela ukukhetha isikela okokuqala
Ngaphambi kokuba uthenge qiniseka ubambe scythe esandleni bese unquma ephatha elula kakhudlwana. Uma endaweni insimu ka ugunda ezingaphezu kuka-200 metres square. M., Kungcono makudle onobuhle wayibhinca phezu kwehlombe - Amathe isisindo uzobe kancane wazizwa. Futhi mowers zihlukaniswa imodeli injini - phezulu nofana phasi. isikhundla engezansi motor kwenza ukuhamba ezikwazi, kodwa awukwazi sika utshani ezimanzi ngaphansi kwakhe. Induku iqondile futhi lwalugobile.
Kufinyeta osekushiwo: trimmers usebenza ngamandla okusezingeni eliphezulu, kwenza ngcono ukuklanywa imimese izimele kwamandla. Manje uyazi ukuthi ukukhetha trimmers.
Bimetal Sectional kurediyetha Sira: ukubuyekezwa. Irediyetha uxhumano Sira
Indlela yokulungisa nokuhlolwa Blog kungase kutholakale izindlela namasu kangcono abafundi
Derek Redmond biography nesithombe